Corona virus: 252 ka natara | Apg29
Corona virus: 252 ka natara
All onye ọrịa adịghị anwụ anwụ!
Right now, 11.373 ọrịa na Corona virus. Of ndị, 259 nwụrụ, ma 252 naputara!
Corona virus na Jonkoping
Ụnyaahụ m chọpụtara na Sweden ka natara ya mbụ enen ikpe nke coronavirus, a 20 afọ nwanyị a dịpụrụ adịpụ na asị ufọkibọk ke Ryhov na Jonkoping . The abụọ ndụ video m mere ka on Corona virus. Tinyere ihe ndị ọzọ, ihe mere ha mmenyenjo anyị na coronavirus?
Early on, m chere na ọ bụ nke ukwuu na-eyi egwu na abawanye. All na-eme ka Corona virus-adịghị anwụ anwụ. Ndị nwụrụ ndidi multi-arịa ọrịa ndị mmadụ, dị ka ọtụtụ n'ime ndị nwụrụ nke ezì flu a afọ ole na ole gara aga. Ugbu a na coronavirus bụ na ọganihu na-amalite na nkịtị n'oge a kara aka influenza , bụ nke pụrụ iduga ọtụtụ narị Swedish ọnwụ . Ọ bụrụ na scares bụghị ndị mmadụ na kọrọ dị elu.
The 20-afọ nwanyị na Jönköping bụ eto eto, eleghị anya siri ike, ma ha adịghị anwụ anwụ. Ọ ga-esi otú naghachi anya.
Right now, 11.373 ọrịa na Corona virus . Of ndị, 259 nwụrụ , ma 252 naputara !
Anyị bụ ndị kweere na Jizọs ga-ekwe ka anyị onwe anyị ga na-emenye ụjọ na jupụtara egwu nke coronavirus. Anyị nchekwa bụ na Jizọs Kraịst, ihe ọ bụla na-eme.
Chineke ga-azọpụta unu ihe-otiti
Ụnyaahụ na-akpọ Rune nna nna m. N'ihi coronavirus, o nyere m a oké Akwụkwọ Nsọ:
Ps 91: 5th Ị gaghị na-atụ egwu na ụjọ n'abalị, ọ bụghị akụ na ijiji site ụbọchị, 6 bụghị ihe otiti nke na-ejegharị n'ọchịchịrị ma ọ bụ ihe otiti dajụọ na noonday.
Gịnịkwa mere anyị adịghị atụ egwu onye kwere ekwe na Jizọs? Na aga amaokwu, ị na azịza ya:
Psalms 91: 1 Ọ na bi N'atu patronage noro n'okpuru ndò nke Onye Pụrụ Ime, 2 ọ na-ekwu: "Onyenwe anyị bụ ebe mgbaba m na m ebe e wusiri ike, Chineke m, m na-atụkwasị obi." 3 Ọ ga- anapụta gi si n'ọnyà nke fowler na si na-ebibi ihe otiti . 4 ya feathers ọ ga-ekpuchi gị, n'okpuru nku ya, ị ga-agbaba. Ikwesị ntụkwasị obi ya bụ a ọta na ọta.
Ọ bụrụ na ị natara Jesus Christ na ọkọdọ zọpụta otú ahụ ka m n'ezie nwere ike ikwu na ị na-eme otú ahụ. I nwere ike na-enweta Jesus site ekpe ekpere ekpere a chọrọ àmà siri ozugbo Jesus:
"Jesus, m na-enweta ugbu a na-ekwupụta na ị na dị ka Onyenwe anyị. M kwere na Chineke kpọlitere gị nwụrụ anwụ. Daalụ m ugbu a na-azọpụta. Ekele gị na ị na-agbaghara m na-ekele unu nke m na ugbu a a nwa Chineke. Amen. "